महाअभियोग सिफारिस समिति गठन, को को छन् सदस्य ?
महाअभियोग सिफारिस समिति गठन, को को छन् सदस्य ?	By नवीन सन्देश on	३ कार्तिक २०७३, बुधबार १६:३३
काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसदले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ । बुधबारको संसद बैठकले समितिलाई सर्बसम्मत पारित गरेको हो । समितिमा एमाले र कांग्रेसबाट ४-४ जना, माओबादीबाट २ जना र राप्रपा नेपालबाट १ जना छन् ।
राप्रपा नेपालले समितिमा आफ्नो प्रतिनिधिलाई नराखे प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि अन्तिम समितिमा राप्रपा नेपाललाई पनि समाबेश गराईएको हो ।
समितिमा एमालेबाट केशव बडाल, सुशीला नेपाल, पार्वत गुरुङ र रेवतीरमण भण्डारी रहेका छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दीपक कुइँकेल, फरमुल्लाह मन्सुर र कुमारी लक्ष्मी राई छन् । यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट अमनलाल मोदी र रामनारायण बिडारी सदस्य छन् भने राप्रपा नेपालबाट प्रमुख सचेतक दीलनाथ गिरी समितिमा रहने छन् ।
समितिले संबिधानले महाभियोग लगाउन सकिने भनिएका व्यक्तिलाई महाभियोग लगाउने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबिन गरी संसद समक्ष सिफारिस गर्न छ ।